नारायणहिटी दरबारको पुनर्निर्माण कहिले ? – ToplineKhabar
काठमाडौं – भूकम्पले नारायणहिटी दरबारका पर्खालदेखि भवनसम्ममा क्षति पुर्‍याए पनि अहिलेसम्म निर्माण गर्ने सुरसार गरिएको छैन । दरबार सङ्ग्रहालयले एक वर्षअघि नै सरकारसँग रकम माग गरे पनि उपलब्ध हुन नसक्दा निर्माण कार्य थाल्न नसकिएको सङ्ग्रहालय प्रमुख रोहित ढुङ्गानाले बताए ।
← नेपालमा इन्टरनेट महँगो
गंगामायाको स्वास्थ्यमा राष्ट्रपतिको चासो →
कसले गर्ने यिनको उपचार ?
November 15, 2016 नरेस तिवारी 0
युवा स्वरोजगार कोषबाट अब ५ लाख ऋण पाइने
December 22, 2016 नरेस तिवारी 0
भद्रगोल उम्मेदवारी: ठूला दलले नै मापदण्ड पूरा नगरी दर्ता गरे समानुपातिकमा उम्मेदवारी